अत्यन्तै दुखद खबर सुर्खेतमा क’रे’न्ट लागी एक युवकको मृ,त्यु, अलिकता पनि दया माया भए #Rip लेख्नुहोस - Nepal Aawaaj
अत्यन्तै दुखद खबर सुर्खेतमा करेन्ट लागी एक युवकको ज्यान गएको छ। अलिकति पनि दया माया भए rip लेखी पेज लाई like गरि सक्दो शेयर गर्नुहोस्।
लाईन जोड्ने समयमा अचनाख बिधुत सन्चालन भए पछी करेन्ट लागेको हो। काम सकिएको जानकारी दिए पनी केही समय ढिला गरेको कारण यस्तो घट्ना घटेको स्थानीयको भनाई छ।
यो पनी हेर्नोस बाँके जिल्लामा केही समय अघि एक युवतीको मृत्यु हुनेगरि भएको सडक दुर्घटना बैंक म्यानेजरसँग डेटिङ गएर फर्कदा भएको खुलेको छ । उक्त दर्घटनामा राप्रपा बाँकेकी नेतृ विन्दु चर्तीमगर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धम्बोझी शाखाका म्यानेजर विनोद पाण्डे घाइते भएका थिए भने संगिता मगरको ज्या न ग ए को थियो ।
नेपालगञ्ज कार्यालय भएको सेताखरी अनलाईनले यसबारे समाचार छापेको छ । सो अनलाइन अगिाडि लेख्छ, संगिताका श्रीमान विदेशमा रोजगारी गर्छन् ।
सधैं बाहिर जाँदा बैंकको ड्राइभरलाई लिएर जाने बैंक म्यानेजरले किन त्यसदिन आफैंले चलाएर गाडी लगे त? दिन ढल्कन लाग्दा विन्दु र संगितालाई लिएर किन निस्किए त म्यानेजर पाण्डे? भन्ने प्रश्न उक्त अनलाईनले उठाएको छ ।
बैंक म्यानेजर पाण्डेले चलाएको गाडि फर्कने बेला पूर्वी दिशाबाट आइरहेको वाणिज्य बैंकको टाटासुमो गाडी र पश्चिमबाट पूर्व गइरहेको ट्रक रातीको ८ बजेतिर बाँकेको शम्शेरगन्ज नजिक एक आपसमा ठो कि ए र उक्त दुर्घटना भएको थियो
नातिको बञ्चरो प्रहारबाट वृद्ध हजुरआमाको मृत्यु